A itinye na osimiri na-adịghị arụ ọrụ nke Parla | Njem zuru oke
A mikpuo na mmiri nke Parla
Ezigbo Madrid | | Madrid
Na mbata nke oge ọkọchị, otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa anyị chọrọ bụ ịmịnye mmiri nke ọma n’ọdọ mmiri. Ndị ọchịchị abanyelarị izu ole na ole ma ugbu a ọ bụ oge nke Osimiri artificial nke Parla, nke dị puku mita iri anọ nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ dị ka à ga-asị na anyị nọ n'ụsọ oké osimiri ekele maka nnu nnu, ájá na igwe na-efegharị efegharị.
Kemgbe June 21 gara aga, oghere a nwere ọdọ mmiri 3, nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ebe picnic na swings maka ụmụntakịrị, meghere ọnụ ụzọ ya maka ọha na eze iji mee ka oge ọkọchị kacha mma.
Ihe omuma banyere osimiri Parla
Adreesị: Av. De las Américas, s / n
Ekwentị: 91 202 47 75
Ahịa: ndị okenye € 10,25 na ụmụaka € 5,15. Edebara aha na Parla: ndị okenye, € 6 na ụmụaka, € 3.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » A mikpuo na mmiri nke Parla
Nwere ike iburu nri gaa n'ụsọ osimiri nke Parla?
Osimiri Parla nwere ebili mmiri?
10.25 ntinye ndị okenye? nke ahụ bụ ohi ... ekweghị ekwe.
10 euro maka ndi okenye ??? 5 maka ndị okenye ebipụtawo na mgbasa ozi dị iche iche, dị ka akwụkwọ akụkọ, interns wdg ... ịpụ ohi ma ọ bụrụ na ọnụahịa emelitere maka oge okpomọkụ a
10 euro maka k na-abịa site n'èzí
mana maka m ọ bụ 6 na ọ dịghị njọ
Wayzọ a karịsịa ibu slide
Euro 10 maka ndị si mba ọzọ bụ ịpụnara mmadụ ihe ... agbanyeghị etu ọ dị.
Ọ bụkwa na anaghị m ahụ ihe ijuanya ma na-ana ikike n'ọnụ ụzọ 10 euro ... Echere m nke ukwuu.
Echere m na n'oge ụfọdụ ha na-etinye ebili mmiri ... ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ ... mana ọ dị ka ọbụnadị nke ahụ.
ụdị ọma dijo
Ajuju a bu osimiri ohuru a maka ndi no na nzuko omeiwu ma obu onye obula? Anaghi m acho ikpa oke, agbanyeghi onu ahia, ihe obula
Zaghachi ka ị mara hugo nunes
O ruru 10,25 euro maka ndị toro eto na-aga mba ọzọ. Ọ bụ nghọgbu zuru ezu, na-atụle na aquópolis kwesịrị euro 12,50 euro !!!!! N'iji ya tụnyere, osimiri ekwesighi ma ọlị, gaa n'ihu ma hapụ ha ka ha nọrọ n'akụkụ oke osimiri !! Ka ọ dịwa, ndị ohi ..
Anọ m ebe ahụ n’oge ọkọchị gara aga ma enwere m nkụda mmụọ.
1º Ha boro m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 11 n'ihi na esighị na Parla mgbe m bi
11 afọ ebe ahụ wee hụ ndị na-esiteghị na nzuko omeiwu ma ọ bụ ebe ọ bụla ma na-ebo ha ebubo 6 yana maka ndekọ ahụ achọghị m ịkpa oke agbụrụ n'ụzọ ọ bụla mana ọ na-ewute m nke ukwuu ebe m hụrụ ya dị ka ịkpa oke zuru oke.
Nke abụọ O nweghi ebili mmiri !! Ndị ọlụlụ gị na-eme mgbe ọ tụrụ onwe ya na ogbunigwe bụ sọsọ ebili mmiri ị hụrụ!.
3º Na ájá sitere n’osimiri… ga-ahụrịrị ihe kpatara m ji nwee n’ogige ahụ dị n’akụkụ ụlọ m bụ otu ihe.
Nke anọ Enweghị ebe miri emi gafere 4.
M kwuru na m gara aga n'oge ọkọchị ma ha agaghị ahụ m ebe ahụ ọzọ.
ntinye abụghị € 10 mana € 6.60 maka ndị okenye yana € 3.30 maka ụmụaka
O yighị ka ọ dị mma n'anya m ma na maka ndị na-anaghị ekwu okwu ọ na-efu ọnụ karịa .. euro 3 ma ọ bụ 4 maka ndị na-ekwu okwu na 6 maka ndị na-abụghị ya yiri ọnụahịa ezi uche dị na ya, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 11 ...
Echere m na ndị nọ na nzuko omeiwu kwesịrị ịba ụba karịa maka ihe niile, mgbe ha na-aga Madrid
ọ bụrụ na ha gbanye mmanụ ụgbọala - dị oke ọnụ
ọ bụrụ na ha gaa sinima - dị oke ọnụ
ọ bụrụ na ha rie nri n’ụlọ nri — ọ dịkwa oke ọnụ
bụrụ smart ma mara ihe
Okwu a ekwuola - gaa gwa - ka ...
Zaghachi na chifri
Anaghị m ahụ ọnụahịa ahụ jọrọ njọ ... ihe m chere bụ na ndị mmadụ bụ pijotera ma ọ bụrụ na ha enweghị mmasị n'ụsọ osimiri, ha na-aga bathtub nke ụlọ ha na ọ ga-adị ọnụ ala karịa ... Echere m na ihe niile abụghị can nwere ike ịnweta ihe niile na ndụ a, nke anyị nwere osimiri n'akụkụ ya, anyị enweghị ike ịchọ ka ọ dịrị onye ọ bụla mma.
Zaghachi ka lidia
Banyere nri? Nwere ike ibute nri gị?
Ndewo, a bụ m ụnyaahụ Sọnde (Julaị 25) ma eziokwu bụ na enweghị m mmasị na ihe ọ bụla, ibido n'ọnụ ụzọ ọdọ mmiri niile agba ahụ agbaala ma ọ na-akọ ụkwụ gị, kedu ihe m ga-ekwu na ihe ha na-akwụ maka Ọnụ ụzọ m nyere ha ka ha nwee ike see ya tupu oge ọkọchị, ụlọ oriri na ọ theyụ restaurantụ ha na-enye nwere 4 sandwiches dị oyi na 3 na, n'etiti ọtụtụ dịgasị iche iche, ọ na-efu m ọtụtụ ihe ịhọrọ, ájá dị n'ụsọ osimiri ha na-ekwu dị ka gravel si ọrụ jupụtara na nkume Ha na-agbazinye nche anwụ maka ịhapụ NJ na na enwere ebe picnic nwere ihe dị ka tebụl 20 maka ọ bụrụ na ị na-ewere nri gị n'ụlọ, slide ahụ dị jụụ mana ọ na-emechi ogologo oge nke ụbọchị.
Ezi ehihie, m bịara na ezinụlọ si «LA PLAYA DE PARLA»? A ga m agwa gị gbasara ụbọchị m ma ị ga-enye echiche gị… Ọnụ ụzọ ahụ dị oke ọnụ mana ọ bụ ụbọchị dị mma ma ọ nweghị ihe na-eme, ezigbo ahịhịa Gburugburu na ịhapụ ID Ha na-enye gị nche anwụ, tupu ịbanye ọdọ mmiri ahụ, enwere ntakịrị aja site na ogige ahụ (dị ka nke ụmụaka) .na ọ bụ mmiri nnu (dịtụ obere) wee nwee obere ọdọ mmiri ọzọ nwere slide na otu maka umuaka ntà: Ikpọ ya playa de parla bụ ezigbo ndakpọ olileanya ... ọ ga-aka mma ịkpọ ya ọdọ mmiri nwere obere aja aja, a na-akụda ala nke Ọdọ Mmiri na anyị ga-akwụ ndị okenye 1.70 ụgwọ na ụmụaka 10.86 ọ dị ka ịpụnara mmadụ ihe, mgbe ahụ, anyị ga-ewe foto ụfọdụ na ụmụaka na ndị nche swornụrụ iyi ekweghị ka anyị (ọ bụ machibidoro ya) Ana m asọpụrụ ya mana ihe m na-anaghị asọpụrụ bụ agụmakwụkwọ nke ụmụ nwoke na-achịkwa harrensol (ha yiri). picnic ebe nwere 5.60 table (bụghị nke Jan eri na ahihia) na ọdọ mmiri nwere ikike nke mmadụ 20 ... ị naghị eche na iri nri na tebụl ị ga-echere ma ọ dịkarịa ala awa ole na ole ??? nke ahụ mere ... ụbọchị ahụ bụ ọ dị mma mana n'ezie agaghị m alaghachi ọzọ, izu na-abịa aga m aga Calpe ọ dịkarịa ala ájá bụ osimiri abụghị gravel ... ekele m niile ma ana m agba ndị ọzọ ume ka ha ghara ịla, ka ndị parla nwee ọ enjoyụ osimiri ya ama? 'Ọ ga-amasị m ịmara onye mepụtara aha ekele
M bụ na ìhè na ihe niile. Ndi ke bu nne nke umunwanyi m abuo ugbua lee ma uzo m abiaara m pa kejaros gi
Maka ndị nwere mmasị, ọ baghị uru ịkwụ ụgwọ € 10,90 (anyị esiteghị na Parla), ka ị banye na osimiri nke nwere naanị ihe dị ka 2 mita nke aja aja, ebe a machibidoro ị dinara ala, na Nke ahụ Ọ bụ ya mere na ị nwere mpaghara ahịhịa ahịhịa, nke dị na nche na nche anwụ ha na-agbazite n'aka gị, maka 1,50 XNUMX ịhapụ aha gị, nke amachibidoro. Nche anwụ a anaghị ebili ọtọ, ebe ọ bụ na isi ya, ijide ya, enweghị ibu. (Ọ bụrụ na ị na-aga n’oge, ị nwere osisi ma ọ bụ ndị ọzọ na nche anwụ edozi, ị nwekwara ike were otu n’ụlọ gị).
Nwa m nwoke 2 akwụghị ụgwọ, ma nne di m, onye lara ezumike nká, kwụrụ ụgwọ okenye.
Facilitieslọ ọrụ ahụ enweghị ihe pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ọdọ mmiri ndị ọzọ nke ime obodo, na mgbakwunye, ha nwere ike idozi ala ọdọ mmiri ahụ, nke nwere ihe mgbochi dịpụrụ adịpụ, na ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya ị ga-aga.
Amachibidoro ịse foto n'akụkụ mmiri, ebe ọ bụ na otu onye nchekwa ndụ gwara m, ọ bụ maka nchekwa nke nwatakịrị, nke m chere na ọ dị oke mma, mana ọ bụ naanị nwa m nwoke na nna ya ga-ese foto ndị ahụ.
Echere na ị gaghị eri nri na ahịhịa, nke ahụ bụ ebe a na-eme picnic, nke nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na oche osisi. Ebe ahụ dị mma, mana ị na-atụ egwu ịhapụ nche anwụ gị, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-achọ ntọala iji jide nche anwụ na ha enweghị ike ịchọta ha n'ihi na e nwere ndị na-eji ntọala abụọ maka otu nche anwụ. Ya mere, anyị riri sandwiche anyị na ahịhịa.
Na nkenke, ọ bụghị ọnụ ahịa ya, ọ bụrụ na ị bụghị site na Parla, ịkwụ ụgwọ ọnụ ụzọ ahụ, nke yiri ka ọ karịrị m nke m ji obi ụtọ kwụọ ụgwọ, ka m nwee ike ịza ajụjụ ma nwee obi ụtọ na nwa m n'ime ọdọ mmiri. Ọ gaghị adị njọ ka ha daba ọnụahịa maka onye ọ bụla, Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ọ bụ karịa ma ọ bụ obere ọnụahịa, mana anyị niile nwere ike ịnụ ụtọ iche n'echiche na oge na Parla a malitere ọrụ iji cheta oke osimiri nakwa na a ka nwere otutu itinye ego.
Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na e nwere otu afọ, na mmadụ bịara na otu esi ebu simulation na ọnọdụ, ihe kacha nso n'akụkụ osimiri. Nke a nwere ọtụtụ ihe ịchọrọ
makina parleño dijo
Ọ bụghị ohi, ihe na-eme bụ na osimiri jupụtara na ndị si obodo ọzọ na ndị nọ n'èzí bụ ndị nzuzu na m ga-akpa ókè agbụrụ ma ana m ekweta ya
Zaghachi parleño makina
Gịnị na-eme bụ na ị bụ ụyọkọ ndị ogbenye na ị gaghị ewetali ya… “Maria kuki” kwesịrị ya.
N'agbanyeghị, ihe ọzọ m ga-aza. Ikekwe anyị ga-ada ogbenye karịa gị ma ọ dịkarịa ala, anyị maara otú e si ede ihe. Na mgbakwunye, ederede gị na-egosi na ị nweghị ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ego karịa ndị ọzọ mana na, n'ezie, ọ bụ ndị mụrụ gị na-akwado gị na onye ị ga-agba ọbara n'akpa gị kwa izu ụka. Cheers.
Ya mere, echegbula onwe gị banyere ọdọ mmiri ma lekọta nke gị! M dee dika m si choo.
Ọ bụrụ na ị gụchara ihe ndị a kwuru, ị gaara ahụ na ihe m kwuru si n’afọ 2008. Ọ bụrụ na m zara gị, ọ bụ maka na ị zoro aka na m. Na mgbakwunye, ana m echetara gị na ebe a onye ọ bụla na-ede ihe ha chere na anyị nwere ikike inye echiche dị oke mkpa ma dị mma.
Maria, iberibe nzuzu, ọbụlagodi na okwu gị sitere na ụbọchị atọ ma ọ bụ afọ atọ gara aga, ihe ị na-eme bụ enweghị nsọpụrụ nke ndị mmadụ, ị na-eme mkpesa na ha na-ana ndị ọzọ mpụ karịa mgbe ha mere nke a n'ọtụtụ obodo ha mere afọ na pinto ... izu ike gi n’amaghi ama gi
i nwere ike ime n'elu ha